-- जसकुमार राई
बेलायतले गोर्खालीहरुको इतिहास सुनौला अक्षरले लेखेको पाउँछौँ । वीरहरुका “महावीर”, उदारहरु मध्येका उदात्त, बेलायतजस्तो भाग्यमानी अर्को कुनै देश छैनजसले तिमीहरुजस्तो बफादार बफादार मित्र पाएको होस्” प्राध्यापक सर राल्फ टर्नर प्रथम विश्वयुद्धमा गोर्खा सैनिक कमाण्डर रहेका टर्नर गोर्खा वार मेमोरियल इन ह्वाइटहलको भनाई बेलायतमा राखीएको गोर्खाली सालीकमा उत्घ्रित गरिएकोछ ।
तर नेपाल सरकारले यी वीर योद्धालाई कहिल्यै सम्मान र गौरव गरेन । यो आजको यथार्थ पनि हो । योद्धा हुनुको आत्मगौरव गराउनुको बदला गुमनामीको अँध्यारोमा बस्न बाध्य पारियो । यहाँ समग्र योद्धाहरुलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्दथ्यो । त्यो सम्मान कहिल्यै नेपाल सरकारले देखाउन सकेन । खाली यी योद्धा जातिलाई असमानता र भेदभाव मात्र गरिरह्यो । हाम्रा महान् योद्धालाई आज पनि अन्याय र अत्याचार भएको खबर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले दिइरहेको बेला पनि नेपाल सरकार मौन छ । ‘संसारभरका जुनसुकै सैनिकसँग मेरो सेनाले लड्न सक्छ, तर, गोर्खाली भनेपछि मेरो मुटु काम्छ । . हिटलरको यो उक्तिलाई मनन गरेर हेर्दा पनि उनले गोर्खा सैनिकहरुको बहादुरीप्रति यो टिप्पणी गरेका हुन् । त्यसमा पनि बेलायती सर्वोच्च युद्धपदक ‘भिक्टोरिया क्रस×’ विजेताहरुको साहस र वीरताको अघि विश्व नै नतमस्तक छन् ।
हामी संग अहिले गाँउ घरमा अहिले युद्दका कथा भन्ने हाम्रो लाहुरे बाजेहरु अब त्यति छैनन । दोश्रो विश्वयुद्द लडेका लाहुरेहरु अहिले औलामा गन्न सकिन होलान तर उनिहरुको सम्झना धुमिल हुँदै गएको छ । उनिहरुले लडेको ठाँउ र आफ्ना लडाईमा गएको साथीको नाउँ विर्सन्दै गएकाछन् । विर्सनु भनेको ईतिहासको अमिलो विर्सजन हो । यसलाई संझना गर्ने काम हाम्रो भए पनि यो संझना केवल संझनाका लागि मात्र नभई भावी पीडीको लागि ऐतिहासीक विराशत हो यो विराशतलाई गौरविलो बनाउन आफै मात्रै फुर्केर हुँदै हुदैन । यसको लागि त जुट्नु पर्छ ।
क्षत्रे टोपी लम्काई, खुकुरी चम्काई ,
लाहुरे पुगे रेलिमाई बैरिको देशैमा ।
केटाकेटी स्वास्नी जम्मै घरको माया मारी
भोकभोकै लडी हिँड्छन् बैरि चहारी चहारी
मास्टर मित्रशेन थापाको स्वर÷संगीत रहेको यो गितका गायक आफै लाहुरे थिए । जसलाई आज पनि हामीले कालजयि गितको उत्कृष्ट नमुनाको रुपमा लिने गछौ । तर यो गितलाई संरक्षण अनि कालजयि बनाउन हामीलेके के योगदान गर्याै त ? हामीले यस्ता गितहरुको संकलन यसको गरिमा बढाउन तत्परहुनको लागि अब कस्को नेतृत्व पर्खेर बस्नु पर्ने हो ? यो गित भावना भन्दा पनि तथ्यमा खुलेकोछ जसले ईतिहासको पानालाई एक श्वास र थोरै बसाईमा हामीले सुन्न सक्छौ ।
भी.सी. पाई नाम कमाई किरिच घिसारी छाउनीमा,
धन्य हाम्रो गजे घले वैरीलाई मा-यो ।
नेत्रबहादुरले सबको सेखी झा-यो ।
दुधको भारी चुकाए सातै कुल ता-यो हजुर
धन्य तिम्रा माता पिता सुवेदार लालबहादुर ,
अमलदार गञ्जुलामा सिपार्ई तुलबहादुर ,
अगमसिंह राई अनि तिनी क्षेत्री शेरबहादुर
यो गित हाम्रो ईतिहासको विराशत हो भने यसको सम्र्बधन र प्रवर्धनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ । हाम्रो पुर्खाले लडेको लडाँईको आधारमा अहिले हामीले आफ्नो पहिचानको खोजी गरेको हो भने हामीले हाम्रो पुर्खामाथी लेखिएका सबै लेखोट, सिलोट अनि दस्तावेजको संरक्षण गर्नु ढिलाई गर्नुहुन्न । विश्वलाई आफ्नो वीरताको परिचय दिने गोर्खालीको भनाइ नै छूद्यभततभच तय मष्भ तजबल दभ ब अयधबचमू कायर भएर बाँच्नुभन्दा मर्नु नै निको । साँच्चै युद्धको मैदानमा देखाएको बहादुरी किंवदन्तीजस्तो लाग्छ । यो किंवदन्तीका ज्यूँदा एक नायक भी.सी. अझ पनि हामीसँग जीवित हुनुहुन्छ । जसले युद्धको महान् इतिहासमा आफ्नो शिर ठाडो बनाएर शत्रुलाई परास्त गरी इतिहास र वर्तमानमा समानरुपमा जीवित रहनुभएको छ । गोरखाली सौर्य, शुरता, वीरता, इमान्दारिता र स्वाभिमान कहीँ–कहिल्यै कसैका सामु झुकेको र घुँडा टेकेको इतिहास छैन । न त कुनैै समय पराधीन भइ बाँचेको इतिहास छ । गोर्खाली इतिहासले युगौंदखि यही राष्ट्रिय गौरवको पाठ सिकाउँदै आएको छ र गौरवका साथ यो कुराको घोषणा गर्नसक्छौं, गोर्खालीहरुको यो आत्मगौरवले जिउँदो इतिहास बोकेर आज बाँच्न सफल भएका हामी नेपाली हौं ।
हे बरै ! दशै धारा है नरुए आमा, बाँचे पठाउँला तस्विरै खिचेर
कस्तो लेख्यो भावीले मेरो कर्म लिला कठैबरा हजूर
अझ झलकमान गन्धर्वको यो गित सुन्ने वित्तीकै नेपाली समाजमा २ सय बर्ष देखि परम्पराको रुपमा स्थापना भएको लाहुरे भर्तीको ईतिहास र नेपाली समाजले भोग्नु परेको दुःख एक साथ झल्काउछ । नेपाली मिडीयामा आएको चर्चीत गीतले पहिलो पल्ट आम संचारको माध्यममा गोर्खालीहरुको पीडालाई झल्काएको थियो यो कालजयी गीत नै गोर्खाली लाहुरेहरुको दुःखको दस्तावेज थियो । आफै लेख्न नजान्ने अर्काले लेखिदिनु पर्ने भएकोले नै
गोर्खालिहरुको ईतिहासलाई लेख्न आफैले कहिल्यै कोशीष गरेको पाईन्न ।
बटौलीको बजारैमा चार पैसाको लाहा छैन
शीरको स्वामी स्वर्गे हुँदा घरा बस्नेलाई थाहा छैन
सिसै काट्यो गोलीले रणमा परी मरेछन् लाहुरे
बाबा रुलान है वर्ष दिन आमा रुलिन जुनीभर हजुर ।
के हामी साँच्चीकै बहादुर थियौ त ? हाम्रो बलिदान पैसाको लागि मात्रै थियो त ? हाम्रो बहादुरीतामा त्यस्तो के आत्म सम्मानछ जसले हाम्रो देशले गौरब गरेकोछ ? भनिदिएर हामी बहादुर भएको भए साच्चै हामी यतिबेला ईतिहासमा कति लज्जीत हुने थियौ । यो गितको सान्दर्भीकता पनि समाप्त भएर जाने थियो । मास्टर मित्रशेन थापाको स्वर÷संगीत कै अर्को गितको हरफलाई हेर्ने हो भने पनि यूद्दको विवशतालाई सहजरुपमा हेर्न सकिन्छ । युद्धको मैदानबाट सहिद हुनेहरुको चिहानमा कसैले लेखेको थियो “हामीले लडेको युद्ध भोलिको शान्तिको लागि थियो, उनीहरुले त्यसबेला अवश्य नै बुझ्नेछन्“ ९ध्जभल थयग नय जयmभ, त्भिि तजझ ायच गक बलम क्बथ ायच थयगच तयmयचचयध, ध्भ नबखभ यगच तयमबथ० । यो जीवनको यथार्थलाई भोग्नेहरुले के पाए ? जो हिजो कसैको शान र मानको लागि लडेको थियो ।
जानै प-यो जर्मनको धावामा ।
हामी फीर्छौ दुश्मन मारेर
बस्नु कान्छी फूलमाला लिएर
वर्माको यूद्द होस या जर्मनको आखिर हाम्रा पुर्खाले त्यतीबेला देखेका सपना भनेको बहादुरीताको मात्र नभै यो देशको समृद्धि र विकाशको लागि थियो भन्ने कोही पनि भरपर्दो अहिले सम्म भेटिएकोछैन । घर लौरी यूद्द मैदानमा जानु भन्ने उर्दि दिने यो देशको शासक हाम्रो पहिचान र अस्तित्व नामेट गर्न चाहन्थे त्यसैले यो देशसंग हाम्रो कुनै दस्तावेज न कुनै आँकडा छ । हाम्रो पुर्खा कति मरे कति बाँचे कुनै खोट खबर नै नराख्ने सरकारको नैरास्यता पनि हामीले भोगी नै रहेकाछौ । अनि कस्ले लेख्छ हाम्रो बारेमा । कसले राख्छ हाम्रो दस्तावेज ? हामी आफै बाहेक ।
वर्माको हजुर लडार्ईमा ,
पाए मैले तक्मा
दायाँ भन्दा बाँया टेके
रक्सी खाको झाँेकमा , नैनिताल ।
लाहुरेको गितमा रेलिमाईको चर्चा नगरी रहन सकिन्न । यो रेलिमाई लाहुरेको पहिचान र दस्तावेज थियो । यो लाहुरे हुनुको आलंकारीक थेगो थियो । लाहुरे दाईको रेलिमाई ...........साँच्चीकै रेलिमाई को अर्थ के होला ? यहाँ लाहुुरेको बाहेक अरुको रेलिमाई हुनै सक्तैन । लाहुरेको बाहेक अरुको हुन नसक्ने विम्ब यति तगडा छ कि यसलाई लाहुरेको महानता र यूद्धको चमत्कारीक श्रृगार अनूभुति गर्न पाँउछौ । कहिले काँही लाहुरेले भनेको सुनेकोछु “यो त सानो खाले रेलिमाई हो । ” यो शब्दले दिने अर्थ अरुपनि होला साधी खोजी त गर्नु नैछ ।
लाहुरे दाईको रेलिमार्य फेशनै राम्रो
हातमा बन्दुक रेलिमाई खुकुरी भिरेको
लाहुरे दाईको रेलिमाई त्यो विर्के टोपी
टापी खस्यो रेलिमाई टिप्दीने काही छौ की ?
हाम्रो जिवनलाई यहाँ सम्म ल्याउन पुर्खाहरुको ईमान्दारीताले नै पहिलो भुमिका खेलेको थियो । उनिहरुले खुशी खुशी दुश्मनको किल्लामा धावा नबोलेको भए हामी यहाँ सम्मको यात्रालाई अरु नै नाम दिन्थ्यौ होला । हामी साँच्चीकै वीर हौ त ? हाम्रो वीरता र सौर्यको बारेमा हामीले दस्तावेज राख्नको लागि पनि ईमान्दार हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
हामी बुद्धु छौ र त वीर छौं
हामी बुद्धु नभइकन वीर हुन सकेनौ ।
कवि भूपि शेरचनको यो आदिम सत्य हरफहरु वीर गोर्खालीको लागि एउटा अर्को ज्यूँदो इतिहासको दस्तावेज हो । हामी नेपाली हौं तर विश्वमा गोर्खालीका नामले चिनिन्छौं । यो पनि ज्यूँदो तथ्य हो । गोर्खाली हुनुको आत्मगौरव र ऐतिहासिकता जीवनको सुखद क्षण मध्ये एउटा हो । गोर्खा भर्तीको झण्डै दुई सय वर्षको इतिहासमा नुनको लागि गोर्खाली सैनिकले सुन दिए भने बेलायती साम्राज्यमा कहिले पनि घाम अस्ताउन दिएनन् । यो कार्यलाई यति इमान्दारितापूर्वक गरेका थिए कि जापानको युद्धवन्दी हु‘दासमेत बेलायतविरुद्ध विद्रोह गर्न चाहेनन्, सट्टामा “हामी मर्न तयार छौं तर बगाबत दिन्नौं ।” भनेका थिए ।
बेलायती इतिहासको लागि युद्ध गर्ने थुप्रै गोरखाली योद्धाहरु अभाव र गरिबीको जीवन ब‘ाचेर युद्ध पीडा बोकिरहेका छन्, जसको क्षतिपूर्ति बेलायतले दिनसकेको छैन । त्यसैले पनि अब इमान्दारिता भन्दा पनि इमान्दारिताभित्रको पीँडाको मूल्य खोजिनुपर्छ । गोरखालीको इमान्दारितामा टल्केको बेलायती महारानी एलिजाबेथको गौरव वास्तवमै एउटा जीवित सत्य हो, जुन गौरवमा गोरखालीको थुप्रै पीँडा थुप्रिएको छ र त्यो पीडा भोग्ने व्यक्तिहरु आज पनि जीवित छन् । जो वीरता र सौर्यको नामले आज पनि ब्रह्माण्डमा परिचित छन् । यो इतिहासमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जननी भनेर चिनिएको बेलायतसँग अधिकारको खोजी गरिनु आपैंmमा एउटा चुनौति हो ।
नेपाललाई संसारभरी चिनाउने गोर्खाहरुको वीरता र सौर्यको बारेमा भने नेपालमा खासै चर्चा हुने गरेको छैन । ती वीर योद्धाहरु जीवित छँदै उनीहरुको जीवनको साँगो÷पाँगो केलाएर अभिलेखीकरण गर्नु आवश्यककता भइसकेको छ । यिनै गोर्खाहरु हुन् बेलायती जनतासँग नेपाली जनताको साइनो गाँस्ने । तर, बेलायती आमजनतामाझ पनि अब यी वीरहरुको सम्झना झिनो बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । अन्तयमा लाहुरेकै शब्दमा विट मार्छु ।
लाहुरे दाईको रेलिमाई काँधैमा झोला
फेरी भेट रेलिमाई होला की नहोला ?